သုတ်လိမ်းခြင်းမရှိဘဲမိတ်ကပ်ဖျက်ခြင်း - အကောင်းဆုံးအဆင့်များနှင့်ထုတ်ကုန်များ Bezzia
Susana godoy | 19/07/2021 10:00 | လှပမှု
သုတ်ဆေးမရှိဘဲမိတ်ကပ်ကိုဖယ်ရှားရန်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့သိသောကုန်ပစ္စည်းများနှင့်ဖြစ်နိုင်သည်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့ကမိတ်ကပ်ကိုနှုတ်ဆက်ဖို့အရိုးရှင်းဆုံးနည်းလမ်းတွေထဲကတစ်ခုဖြစ်ပေမယ့်ငါတို့ကအမြဲတမ်းအသားအရေကိုကောင်းကောင်းခြေမချနိုင်ဘူး။ ထို့ကြောင့်အခြားရွေးချယ်စရာများကိုလောင်းကစားခြင်းနှင့်တူသည်။
ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မိတ်ကပ်အကြောင်းနှုတ်ဆက်ခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ဟာကျန်းမာတဲ့အသားအရေကိုလောင်းကစားလုပ်ဖို့လိုပြီးခြေလှမ်းတွေကိုလိုက်လျှောက်ဖို့အရေးကြီးတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်တစ်ခုတည်းကိုသာရှာဖွေတွေ့ရှိလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ သို့သော်သင့်အတွက်မိတ်ကပ်နှင့်နှုတ်ဆက်ခြင်းကိုလွယ်ကူစွာပြုလုပ်ရန်နှင့်ပိုမိုလွယ်ကူစေရန်ထိုအဆင့်များထဲမှအချို့သည် ပိုပြီးဂရုစိုက်အသားအရေ.
1 မိတ်ကပ်ကိုသုတ်ခြင်းမရှိဘဲ micellar ရေဖြင့်ဖယ်ရှားပါ
4 အဆိုပါ Konjac ရေမြှုပ်
5 အဘယ်ကြောင့် Wipe နှင့်အတူမိတ်ကပ်ကိုဖယ်ရှားလိုက်ပါ
မိတ်ကပ်ကိုသုတ်ခြင်းမရှိဘဲ micellar ရေဖြင့်ဖယ်ရှားပါ
နေဖို့ဒီနေရာကိုကြောင်းထုတ်ကုန်လည်းမရှိပေမယ့်သောကြောင့်ဖြစ်သည် micellar ရေ။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့အများစုသည်သူ၏သုတ်များကိုသူ၏လက်ထဲတွင်ထားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ၎င်း၏ပုံစံကရေပုံစံဖြင့်၎င်း၏ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံသည်မိတ်ကပ်ကိုတစ်ပြိုင်တည်းဖယ်ရှားပေးသည်။ ၎င်းသည်မျက်နှာတစ်ပြင်လုံးအတွက်သာမကမျက်လုံးအတွက်လည်းအကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ ၎င်းကိုဝါဂွမ်းဖြင့်ဖယ်ရှားပြီးလုပ်ငန်းစဉ်ကိုပိုမိုမြန်ဆန်လွယ်ကူစေသည်။ မိတ်ကပ်ကိုဖယ်ရှားသည့်အပြင်အသားအရေကိုနူးညံ့ချောမွေ့စေပြီးအရေပြားကိုလည်းတိုးတက်စေသည်။ ဤအရာအလုံးစုံအတွက်၎င်းကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်အတွက်ကုမ္ပဏီအလောင်းအစားတစ်ခုဖြစ်သည်။
micellar ရေကိုလုံးလုံးလျားလျားတော်လှန်ရေးအဖြစ်တင်ဆက်သော်လည်း၊ နို့သန့်စင်ခြင်းသည်အခြေခံအကျဆုံးထုတ်ကုန်များထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည် ဒါပေမယ့်မနည်းအရေးကြီးသော။ သန့်ရှင်းရေးအပြင်သန့်ရှင်းစွာပါ ၀ င်သည်။ ဤအကြောင်းကြောင့်၎င်းသည်ခြောက်သွေ့သွားမည်မဟုတ်သော်လည်းဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်သည်။ ၎င်းအကြောင်းပြချက်ကြောင့်၎င်းသည်အထိခိုက်မခံဆုံးသောအရေပြားအတွက်လည်းအကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ သူတို့ကိုသန့်ရှင်းစွာထားခြင်းအပြင်၎င်းသည်၎င်း၏ဓါတ်ကိုထိန်းသိမ်းခြင်းကြောင့်၎င်းအားအနူးညံ့ဆုံးထိတွေ့မှုကိုလည်းပေးစွမ်းနိုင်ပါတယ်။
ဖြစ်ကောင်းကစဉ်းစားရန်ပထမ ဦး ဆုံးရွေးချယ်စရာထဲကတစ်ခုမဟုတ်ပေမယ့်, ကဖော်ပြသင့်ပါတယ် အဆီများကဗီတာမင်များစွာနှင့်များများပါ ၀ င်သည် ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသားအရေအဘို့။ ထို့ကြောင့်၎င်းတို့ကိုကျွန်ုပ်တို့လောင်းနိုင်သမျှအများဆုံးအထိဂရုပြုရမည်။ ဂျိုဗိုသို့မဟုတ်ဗာဒံဆီသည်ကျွန်ုပ်တို့၏အိမ်တွင်ဘယ်တော့မျှလိုအပ်မည်မဟုတ်ပါ။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ကသဘာဝပဲ၊ ဘာလို့လဲဆိုတော့ရေနည်းနည်းကျရင်ငါတို့လုံလုံလောက်လောက်ရလိမ့်မယ်။ အကယ်၍ သင့်တွင်ခြောက်သွေ့သောအသားအရေရှိပါက၎င်းသည်သင့်အတွက်လည်းအကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။
အဆိုပါ Konjac ရေမြှုပ်
၎င်းသည်အလွန်အရေးကြီးသောအရာများအနက်မှတစ်ခုဖြစ်လာသဖြင့်သင်လည်း၎င်းကိုသေချာသိသည်။ ဒါကြောင့်လည်းသင့်ရဲ့မိတ်ကပ်အိတ်ထဲမှာဖြစ်သင့်ပါတယ်။ ကောင်းပြီ၊ သေချာတာပေါ့၊ ထုတ်ကုန်သို့မဟုတ်တစ် ဦး တည်းနှင့်အတူအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ ဒီရေမြှုပ်သည်ဘက်စုံသုံးဖြစ်ပြီး၎င်းကိုအလွန်နှစ်သက်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ အကယ်၍ သင်ကစိုစွတ်စေလျှင်နူးညံ့ပျော့ပျောင်းစေပြီးမိတ်ကပ်ကိုဖယ်ရှားသည့်အလုပ်သည်လည်းပိုမိုလွယ်ကူလိမ့်မည်။ ထို့အပြင်သင်၌ရှိသည့်အရေပြားအမျိုးအစားပေါ် မူတည်၍ ၎င်းအတွက်ရွေးချယ်စရာအမျိုးမျိုးကိုသင်ရွေးချယ်နိုင်သည်။
အဘယ်ကြောင့် Wipe နှင့်အတူမိတ်ကပ်ကိုဖယ်ရှားလိုက်ပါ
အမှန်တရားကတော့ဒီရွေးချယ်မှုတွေကိုကြည့်ပြီးတဲ့နောက်သဘာ ၀ အတိုင်းမဖယ်ရှားဘဲမိတ်ကပ်ကိုဖယ်ရှားခြင်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကိုပြောစေပါတယ်။ အမှန်တရားကတော့ အကယ်၍ သင်သည်ဤအဆင့်ကိုအခါအားလျော်စွာလုပ်ပါကဘာမျှဖြစ်မည်မဟုတ်ပါ။ သို့သော်ယင်းတို့ကိုစဉ်ဆက်မပြတ်အသုံးပြုခြင်းကသင်၏အသားအရေကိုကောင်းစွာနှိုက်နှိုက်ချွတ်ချွတ်မသန့်ရှင်းစေနိုင်သည်။ ဘာလဲ အပေါက်များပိတ်ဆို့ခြင်းနှင့် blackheads ပေါ်လာစေပါလိမ့်မယ် နှင့်၎င်း၏အားလုံးမျိုးကွဲ။ ၎င်းဒြပ်ပေါင်းများကြောင့်အသားအရေကိုပိုမိုခြောက်သွေ့စေသည်။ အထူးသဖြင့်ဓါတ်မတည့်သောအရေပြားရှိသည်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်၎င်း၏အသုံးပြုမှုကိုတတ်နိုင်သမျှကန့်သတ်ထားပြီးရေနှင့်အရေပြားကိုသန့်ရှင်းစေရုံသာမကအထက်ပါထုတ်ကုန်များကိုလည်းရွေးချယ်ရမည်။ ၎င်းသည်အမြဲတမ်းကောင်းမွန်သောကုထုံးဖြစ်သည်။ ပြီးတော့သင်? မိတ်ကပ်ဖယ်ရှားသည့် Wipe များကိုသင်အသုံးပြုပါသလား။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Bezzia » လှပမှု » Wipe မပါဘဲမိတ်ကပ်ကိုဖယ်ရှားပစ်ရန်ကဘယ်လို